१.०५ प्रतिशत घट्यो नेप्से | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर १.०५ प्रतिशत घट्यो नेप्से
१.०५ प्रतिशत घट्यो नेप्से
१४८९.०६ विन्दुमा नेप्से
कात्तिक ३०, काठमाडौं । साताको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचक १ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत घटेको छ । कारोबार भएको केही समय बढेको बजार त्यसपछि निरन्तर घटेर बन्द भएको हो । नेप्से १५ दशमलव ७३ अङ्क घटेर १ हजार ४ सय ८९ दशमलव शून्य ६ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । बिहीवार अधिकांश बीमा कम्पनी लगाएत अन्य कम्पनीहरुको पहिलो वित्तीय विवरण प्रकाशित भएको छ । प्राय नाफा मुलक विवरण प्रकाशित भएको बीमा कम्पनीको परिसूचक पनि घटेको छ ।
कात्तिक महीनाभरिमा नेप्से २० दिन शेयर कारोबार भएको छ । कारोबार भएको २० दिनमा ५ दिन मात्र शेयरबजार बढेको छ भने १५ दिन बजार घटेको छ । महीनाको अन्त्यमा १ सय ३८ दशमलव १५ अङ्कले बजार घटेको छ भने ६८ दशमलव शून्य ३ अङ्कले बजार बढेको छ ।
यस दिन कारोबार भएका १ सय ५९ कम्पनीको ५ हजार ८ सय ८१ पटकको ब्यापारमा ९ लाख ४४ हजार ९ सय ४३ कित्ता शेयरको रू. ४५ करोड ५ लाख बराबरको कारोबार भएको छ । कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा २४ दशमलव ६५ प्रतिशत घटेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण १ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत घटेर रू. १७ खर्ब २८ अर्ब पुगेको छ ।
यस दिन कारोबार भएका १० समूहको परिसूचकमा सबै समूहको परिसूचक घटेपछि नेप्से घटेको हो । होटल समूहको परिसूचक २ दशमलव ३८ प्रतिशत घटेको छ । यस समूहमा पर्ने ओरियन्टल होटल, सोल्टी होटल, तारागाँउ रिजेन्सि होटलको शेयर मूल्य घटेपछि यस समूहको परिसूचक घटेको हो । यस दिन ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन सेन्सेटिभ इन्डेक्स १ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत घटेर ३ सय १३ दशमलव १२ अङ्क पुगेको छ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रतिकित्ता रू. १ हजार ८ सय ९३ मा रू. २ करोड ५९ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । यस कमपनीको प्रकाशित भएको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण नाफा मुलक भएकाले यस कम्पनीको शेयर कारोबार बढेको हो । नेप्सेमा सबैभन्दा बढी शेयर कारोबार भएका १० कम्पनीमा एभरेष्ट बैङ्क, चिलिमे हाइड्रोपावर, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्कको संस्थापक शेयर, लाइफ इन्स्योरेन्स, सिटिजञ्स इन्भेष्टमेण्ट ट्रष्ट, शिखर इन्स्योरेन्स, नेपाल ग्रामिण विकास बैङ्क, नेको इन्स्योरेन्स र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्कको रू. ९७ लाखदेखि २ करोड २२ लाखसम्मको शेयर कारोबार भएको छ ।
हिमालयन डिष्टिलरिको शेयर मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा करीब १० प्रतिशत बढेको छ । चालू आवको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा बैङ्कको सबै पक्षमा राम्रो प्रगति भएका कारण यस कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको हो । साथै, नेपाल हाइड्रो डेभलपर लिमिटेडको शेयर मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा करीब ५ प्रतिशत घटेको छ । मल्टी प्रपोज फाइनान्स र काबेली विकास बैङ्कको शेयर मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा ४ प्रतिशत घटेको छ ।
यस दिन कारोबार भएका १ सय ५९ कम्पनीमा २६ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने १ सय २२ कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ । साथै, ११ कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ । नेप्सेको १४ दिने रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स न्यूट्रल जोन अथवा ४१ दशमलव २७ स्केलमा रहेको छ । यसले बजार सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ । त्यसैगरी, सो दिन नेप्सेको एडी रेशियो शून्य दशमलव २१ रहेको छ । यसले बजार वियरिस प्रवृत्तिमा रहेको देखाउँछ ।